Marco Reus oo niyadjabiyay Man United kaddib markii uu ka hadlay mustaqbalka Jadon Sancho – Gool FM
Marco Reus oo niyadjabiyay Man United kaddib markii uu ka hadlay mustaqbalka Jadon Sancho
Dajiye September 30, 2020
(Yurub) 30 Sebt 2020. Xiddiga kooxda Borussia Dortmund ee Marco Reus ayaa carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay in saaxiibkiis reer England ee Jadon Sancho inuu sii joogo kooxda, iyadoo laga war qabo in adiigiisa ay xiiseyneyso Manchester United.
Laakiin xiddiga reer Germany ee Marco Reus ayaa carabka ku adkeeyay in saaxiibkiis Jadon Sancho uu la sii joogi doono kooxda Borussia Dortmund, xilli ciyaareedkan.
Wargeyska “The Sun” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Marco Reus, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Anaga ahaan ciyaartoyda, tani waa war wanaagsan, waxaan dhamaanteen ku faraxsanahay inuu nala sii joogi doono xilli ciyaareedkan”.
“Wuxuu ku guuleystaa dhibco kooxda darteed, wuu dhaliyaa wuuna abuuraa goolal, taasoo ka tarjumeysa inuu helo dhibco badan, isagu waa laacib muhiim noo ah”.
Dhinaca kale Marco Reus ayaa wuxuu u rajeeyay saaxiibkiis inuu yeesho xirfad adag, sida xiddigaha kubada cagta Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo, wuxuuna yiri:
“Wuxuu ubaahan yahay waqti iyo khibrad, waxaana muhiim noqon doonta sida uu u maamuli doono xilliyada aysan wax hagaagsaneyn”.
Intaas kaddib Marco Reus wuxuu ammaanay Jadon Sancho, isagoo tixraacaya awoodiisa ciyaareed, wuxuuna yiri:
“Wuxuu leeyahay tayo iyo kalsooni”.
Si kastaba ha ahaatee, Manchester United ayaa muujisay xiisaha ay u qabto adeega Sancho tan iyo bilowgii suuqii xagaaga, si loo xoojiyo safka kooxda xilli ciyaareedkan, isla markaana ay ugu dagaalamaan tartamada ay ka qeyb galayaan ha ahaato gudaha England ama Champions League.
Horudhac: Real Madrid vs Real Valladolid… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka caawa ka dhacaya caasimadda Spain)
Wakiilka Donny van de Beek oo ka careysan doorkiisa kooxda Manchester United